I-Guesthouse Studio Yonke - Ukubukwa Kwe-Arbor - I-Airbnb
I-Guesthouse Studio Yonke - Ukubukwa Kwe-Arbor
I-Arbor Guesthouse - i-Arbor View, istudiyo esizimele esinokuthula enkabeni yezwe lewayini lase-Napa Valley. I-Arbor View ingaphansi kwamamayela amabili ukusuka e-Downtown Napa kodwa ikude ngokwanele ukuba uphumule endaweni epholile kuyilapho igcina yonke isevisi ecatshangelwe kahle. Jabulela indawo yethu yokuhlala ethokomele.
Sivunyelwe ngokomthetho ukuqashisela izivakashi zase-Napa Valley
I-Arbor View ikude ngemizuzu nje ngewayini elimnandi, ukudla okuhamba phambili, nezindawo ezinhle zase-Napa Valley. Yindawo enhle ukuqala uhambo lwakho olujabulisayo lwe-Napa Valley.
Istudiyo se-Arbor View sisezingeni eliphezulu leNdlu Yesivakashi ezimele egcekeni futhi inendawo yayo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela nendawo encane yompheme, enendawo yokuhlala yangaphandle nendawo yokudlela yokujabulela ikhofi lakho lasekuseni noma ingilazi yasebusuku yewayini. Indawo yokuphumula ihlanganisa indawo yokubasa umlilo, i-smart TV engu-55 inch, kanye nokufinyelela ku-inthanethi enejubane elikhulu. Ungaphumula kusihlwa embhedeni omkhulu wase-California noma uthathe ubhavu ofudumele ukuze uphumule ngemva kosuku lokunambitha iwayini. Kukhona nefriji encane, i-microwave, umshini wekhofi we-Keurig, ne-toaster etholakalayo ongayisebenzisa ekamelweni.
I-Arbor View studio inendawo yayo yokushisisa ne-air conditioning nendawo yokupaka yamahhala emgwaqweni.
Sinikeza izilungiso zesidlo sasekuseni esilula phakathi nokuhlala kwakho, okuhlanganisa ama-muffins esiNgisi, ibhotela, i-jam, uhlobo lwe-yogurts, i-granola, i-oatmeal, izithelo ezintsha, kokubili ubisi kanye nobisi olungenalo ubisi. Ama-pod wekhofi netiye mahhala kukho konke ukuhlala kwakho.
Istudiyo se-Arbor View sinokufinyelela okulula ku-High 29 ne-Silverado Trail. Isikhathi sokushayela: imizuzu engu-7 ukuya ku-Carneros Region weries nemizuzu engu-5 ukuya e-Napa weries off Silverado Trail, imizuzu engu-20 ukuya e-Sonoma Square, imizuzu engu-10 ukuya e-Yountville, imizuzu engu-20 ukuya e-St. Helena, imizuzu engu-35 ukuya e-Calistoga. Yimizuzu engu-55 yokushayela ukuya e-San Francisco, imizuzu engu-55 yokuya e-Oakland International Airport, nemizuzu engu-75 yokuya e-San Francisco International Airport. Imizuzu engu-5 yokushayela ukuya e-Retreats, i-Trader Joe 's, uhambo lwemizuzu engu-5 oluya e-Luxury Supermarket, ukuqasha amabhayisikili e-Tire ne-Starbucks, i-Spa yasendaweni, i-Barbershop - uhlu luyaqhubeka futhi luqhubeke.
Sinikeza ukungena nokuphuma ngaphandle kokuthintana.
4.98 · 149 okushiwo abanye